Puppies जीवनको पहिलो वर्ष अक्सर केटाकेटीलाई तुलना गरिएको छ। तिनीहरूले धेरै ध्यान र हेरविचार आवश्यक छ किनभने त्यहाँ अनौठो केही छ। धेरै अनुभवहीन प्रजनकों चासो जो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण को एक, puppies मा दाँत को परिवर्तन हो। यो लेख पढ्ने पछि, तपाईंले विशेष ध्यान यस अवधिमा के आवश्यक छ सिक्न छौँ।
के अर्डर र कति महिनामा त्यहाँ puppies मा दाँत को परिवर्तन हो?
यो एकदम प्राकृतिक प्रक्रिया अव्यवस्थित छैन छ। प्रकृति अनुसार केही समय तालिका पिल्ला केही दाँत मार्फत कटौती जो प्रदान। उमेर महिना प्रजाति को बहुमत, योर्कशायर टेरियर, को अपवाद संग पहिले नै दूध दाँत को एक पूरा सेट (प्रत्येक चिबुक लागि 14 टुक्रा) छ। दाँत सामान्यतया, पहिलो देखा पछि - cutters, र त्यसपछि मात्र - मूल। तपाईं तालिका देखि हटना भने, यो कुकुर अनुभवी पशुचिकित्सा देखाउन मनमोहक छ।
उमेर सन्दर्भमा, मा दाँत को परिवर्तन एक जर्मन शेफर्ड पिल्ला र अन्य प्रजातिका बहुमत सामान्यतया कुकुर चार महिना छ पछि हुन्छ। सानो जनावर मा, यो प्रक्रिया अक्सर छ को उमेर पर्छ। यो अवधिको अवधि सामान्यतया 60 दिन छ, र कुकुर को पूरा देखा 42 molars। र आफ्नो फुट्ने काम दूध दाँत को उपस्थिति देखि धेरै फरक छ। यस मामला मा, पूर्वदाढ र molars देखा पछि को incisors, परिवर्तन गर्न सुरु गर्न, र त्यसपछि नुकीले मार्फत कटौती पहिलो।
यो अवधिमा जनावर के खुवाउन?
puppies मा दाँत कुनै पनि समस्या बिना भयो परिवर्तन गर्न, तपाईँले एउटा तर्कसंगत र राम्रो-सन्तुलित आहार तिनीहरूलाई प्रदान गर्न आवश्यक छ। यो समयमा कुकुर क्याल्सियम, फ्लोरिन, फस्फोरस र अन्य खनिज को पर्याप्त रकम प्राप्त महत्त्वपूर्ण छ। जसको दाँत परिवर्तन गर्दै पशु, सफा पिउने पानी लगातार पहुँच हुनुपर्छ। यो fluoride को सबै भन्दा राम्रो स्रोतहरू एक मानिन्छ, canines को स्वास्थ्य को लागि त आवश्यक। अन्य कुराहरु, एक पिल्ला आहार प्रोटिन खाद्य पदार्थ उपस्थित हुन अनिवार्य छ। योग्य पशु चिकित्सकहरु कुकुर एक विशेष भिटामिन परिसर दिन यो समयमा सुझाव दिन्छौं।
यो कसरी कठिन अवधिमा आफ्नो पाल्तु जनावर मदत गर्न?
यो जर्मन शेफर्ड puppies मा दाँत को परिवर्तन कसरी कठिन बित्दै कुनै पनि राम्रो ब्रीडर पुष्टि गर्नेछ। यो प्रक्रिया को लक्षण अन्य जातिहरु कुनै फरक छ। नियम, जनावर lethargic हुन्छ र पनि आफ्नो भोक हराउछ। गरिब स्वास्थ्य कुकुर गम को क्षेत्र मा विकास एक भडकाऊ प्रक्रिया कारण हो। यो समयमा, यो कठिन समय बाँच्न गर्न बच्चा मदत गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न प्रयास गर्न आवश्यक छ। जनावर को अवस्था कम गर्न, त्यो मासु हड्डी र stringy मासु दिन पर्छ। अन्यथा, आफ्नो पाल्तु जनावर दाँत को बस दुई पङ्क्ति देखा पर्न सक्छन्।
यो प्रक्रिया कुकुर को नस्ल निर्भर कि?
सामान्यतया, अनुभवी प्रजनकों के मिति ध्यान धेरै तिर्न र के त्यहाँ nuances puppies मा दाँत को परिवर्तन हो। फलस्वरूप, दीर्घकालीन अवलोकन, यो कि सजावटी र लगभग सबै सदस्यहरू अवलोकन थियो बौना कुकुर , यो प्रक्रिया अलिकति ढिलाइ साथ सुरु हुन्छ। यो हामी dentition जनावर को नस्ल सिधै निर्भर को परिवर्तन को समय भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।
स्पष्टता विवरण लागि यो मुद्दा सामना गर्न सक्नुहुन्छ परिवर्तन दाँत कसरी हुन्छ एक उदाहरण Chihuahua puppies। तिनीहरू एउटा सानो वजन छ र खेलौना जातिहरु सम्बन्धित। सानो जनावर मा अक्सर स्थायी दाँत को फुट्ने काम मा ढिलाइ चिन्ह लगाइयो। यो अवधिमा, यो चिहुआहुआ incisors दुई पङ्क्ति देखा गर्दैन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। तुरुन्त डाक्टर गर्न कुकुर देखाउनुपर्छ संभावित दन्त समस्या जोगिन।
हालैका वर्षहरूमा त्यहाँ dentition परिवर्तन उल्लंघन बढी बारम्बार अवस्थामा तिर र ठूलो जातिहरु सहित Labradors छ, Rottweilers, मुक्केबाजहरु, Dobermans, जर्मन गोठाला र पूर्वी प्रतिनिधिको मा एक धेरै स्थिर प्रवृत्ति छ। सबैभन्दा प्राय सामना पशु चिकित्सकहरु समय ढिला दाँत अनित्य दाँत पूरा हानि मात्र एक वर्ष को उमेर मा हुन्छ जो प्रतिस्थापन।
के सबैले साईट कुकुर मालिक थाहा हुनुपर्छ?
स्वस्थ दाँत एक वर्दी, पारदर्शी र एकदम ठोस कुनै पट्टिका छ मा सतह, र अन्य कमजोरीहरू छन्। यो कुकुर जबड़े को नियमित निरीक्षण पूरा गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले गांठ हुनु हुँदैन। एक स्वस्थ पशु को मुख बाट दाँत क्षय कारण छ कि रोगजनकों को उपस्थिति संकेत, अप्रिय odors emanate हुँदैन।
आदर्श कुनै पनि विचलन टिप्पण, यो चाँडै सकेसम्म डाक्टर आफ्नो पाल्तु जनावर लिन रूपमा आवश्यक छ। एक विशेषज्ञ गर्न समयमै यात्रा आफ्नो कुकुर स्वास्थ्य सुरक्षित र धेरै समस्या जोगिन हुनेछ।
जर्मन गोठालो को उचित प्रशिक्षण
बिरालोहरु ठूलो नस्ल: विशाल आकर्षण
न्यूयोर्क बालिका लोकप्रिय र हास्यास्पद लागि उपनाम
वजन लागि oolong चिया चयन
Dzheyson Doring: जीवनी र चलचित्र
कस्तो भूमिका मोशाको लागि गोंद गर्छ?
प्रसिद्ध मूर्तिकला अलेक्जेंडर रुवाभिसिन्कोव: जीवनी, रचनात्मकता र रोचक तथ्यहरु